ktmkhabar.com - भरमणीको प्रस्तुती हेरेपछि पारसले के भने ?
भरमणीको प्रस्तुती हेरेपछि पारसले के भने ?
सोमबार, भाद्र १४ २०७८
काठमाडौँ – ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले कमेडी च्याम्पियनको गएको श्रृंखलामा पूर्वयुवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरे । उनको प्रस्तुतीले निकै चर्चा बटुलेको छ ।
जो कमेडी च्याम्पियनमा आउनु अघि यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउँन संघर्षरत थिए । युट्युवमा उनका केही भिडियो पहिल्यै हिट भइसकेका थिए । यद्यपि, कमेडी च्याम्पियनको मञ्च पाएपछि उनको पहिचान रातारात उचाइमा पुगेको छ ।
भरतमणिको फिजिकल अडिसन सामान्य थियो । तर, त्यसपछिका प्रस्तुतिहरुमा उनले आगो बाले । एपिसोड ६ मा उनले गरेको पुण्य गौतम र हिमेश पन्तको क्यारिकेचरले धुम मच्चाएको थियो । त्यहीँबाट उनी दर्शकको नोटिसमा पर्न थालेका हुन् ।
उक्त प्रस्तुतिमा कमेडी च्याम्पियनका पूर्वविजेता हिमेशलाई व्यंग्य गर्दै भरतमणिले भनेका थिए, ‘कमेडी च्याम्पियनले खासमा पुरस्कार नै गलत राखेको हो । कार होइन, ट्याक्टर राख्नुपर्थ्यो, हिमेशले कम्तिमा खेत जोतेर जीविका चलाउँथे ।’
१५ औं एपिसोडमा भरतमणिले आफ्नो बेस्ट दिए । त्यसमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित विभिन्न नेताहरुको दुरुस्त क्यारिकेचर गरेका थिए । र, त्यसमा कन्टेन्ट पनि उत्तिकै बलियो थियो ।
भरतमणिले गरेको गोकुल बास्कोटाको क्यारिकेचर त स्वयम् गोकुल बास्कोटा नै झुक्किने खालको थियो । ‘हेप्नी ? मान्छेलाई डिस हान्नी ? औडा अर्नि ? यस्तै–यस्तै कुरा गर्यौ भने भाइ, हामी मान्छेहरु नि कोल्याप्स गरिदिन्छौं ।’
गोकुलको आवाजमा भरतमणिले बोलेको यो डाइलग टिकटकमा यति चल्यो कि धेरैको जिभ्रोमै झुण्डियो । सोही प्रहसनमा भरतले गरेको राजा ज्ञानेन्द्र, रामनारायण बिडारी, राजेन्द्र महतोलगायतको क्यारिकेचर पनि कम्ति टेसिलो थिएन । त्यसपछिका एपिसोडमा पनि उनले आफ्नो स्तर कहिल्यै तल झर्न दिएनन् ।
भरतमणिले गरेको पारसको क्यारिकेचरका बारेमा त धेरै चर्चा भइसकेको छ । यसमा उनले पारसको आवाज मात्र नभएर हाउभाउ पनि दुरुस्त उतारेका छन् । उनले पारसका हुलियामा गरेको डान्स स्टेप टिकटकमा भाइरल भएको छ ।
उनको प्रस्तुती पारसले पनि हेरेका छन् । क्यारिकेचर हेरेपछि छक्क परेको श्रोतको भनाई छ । उनले भरतमणिलाई धन्यवाद दिएका छन् । पारसले उनलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएका हुन् ।
ठूलो दायरामा काम गर्छन् भरतमणि । खासमा उनी कमेडीका प्याकेज हुन् । त्यसमा पनि उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष क्यारिकेचर हो । आजकाल क्यारिकेचर गर्ने कलाकारहरु धेरै जन्मेकाले यो विधालाई हल्का रुपमा पनि लिन थालिएको छ ।
तर, कमेडीमा यो एउटा कठिन विधा हो । एकछिन सोचेर अरुको बोली र हाउभाउको दुरुस्त नक्कल उतार्न सकिँदैन । यसका निम्ति कलाकारले खर्चेको समय र मिहिनेत दर्शकले देख्दैनन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालजस्ता नेताहरुको क्यारिकेचर गर्ने धेरै कलाकार छन् । उनीहरुको क्यारिकेचर हेर्दा हेर्दा दर्शक नै बोर भइसके । भरतमणिले भने पूवयुवराज पारसदेखि रामनारायण विडारी, पुण्य गौतम मात्र नभएर हिमेस पन्तसम्मको क्यारिकेचर गरेर दर्शकलाई नयाँ स्वाद दिएका छन् ।
भरतमणि कमेडीको फुल डोज पस्किन सक्छन् । उनको प्रस्तुतिमा विविधता भेटिन्छ । कमेडी च्याम्पियन जिते पनि वा नजिते पनि उनी लामो रेसका घोडा हुन् । भोलीका दिन नेपाली रंगमञ्चमा छाउन सक्ने सम्भावना बोकेका कलाकार हुन् उनी ।
कमेडी च्याम्पियनभरतमणि पौडेल
अभिनेता अक्षयकुमारको कुल सम्पत्ति कति ?
अभिनेत्री ऋचाको कोखबाट छोराको आगमन, बनिन् छोराकी आमा
अक्षय कुमारकी आमाको निधन : अक्षय कुमारले लेखे, ‘यो पीडा असह्य’
सिद्धार्थको अन्तिम संस्कारमा पुगिन् शहनाज, भाइले सम्हाले
उपत्यकामा खुलेनन् फिल्म हल
सिद्धार्थ शुक्लाको निधन